NGABA IBHANKI IVULIWE OKANYE IVALIWE NGOMHLA WECOLUMBUS 2020? - IINDABA
Ngaba iBhanki ivuliwe okanye ivaliwe ngomhla weColumbus 2020?
Usuku lukaColumbus, oluhlala lubizwa njengoSuku lwaBemi boMthonyama, lubonwa ngeenyanga ezili-12 ngoMvulo, nge-12 kaOkthobha ka-2020. ngolwa suku.
Ngokwe-Federal Reserve, uSuku lweColumbus yenye yezona ndawo ziyi-10 zeziko lezemali e-US apho iibhanki zabo zivaliwe ukubonelela abasebenzi ngosuku lokuphumla. Ibhanki yesizwe yaseMelika Itafile yamaxesha ka-2020 ibonisa ukuba ngelixesha iFederal Reserve ivaliwe nge-12 ka-Okthobha, i-American National Bank iya kuhlala ivulekile ngeColumbus Day. I-TD Bank inokuvulwa kwakhona ngoSuku lweColumbus.
Ngoku ka GoBankingRates.com , Iibhanki eziza kuvalwa ngoMvulo we-12 ka-Okthobha, kugcinwa iholide, ziza neAmarillo National Bank, Ameris Bank, Bank of America, Bank of the West, BBVA, BB&T, Eastern Bank, First Citizens Bank, First Horizon Ibhanki, HSBC, M & T Bank, Peoples Bank, PNC Bank, Regions, Santander Bank, SunTrust, Synovus, Union Bank, USAA, kunye ne Wells Fargo. Iibhanki.org ibonisa ukuba uChase ugcina uSuku lweColumbus njengeziko lezemali kwaye uza kuvalwa, ngokucocekileyo. Ezi bhanki kuya kufuneka zilindelwe ukuba zivulwe kwakhona ngoLwesibini, nge-13 ka-Okthobha, phantsi kweeyure eziqhelekileyo zokusebenza.
I-Stock Market kunye ne-NASDAQ iya kuhlala ivulekile ngomhla weColumbus
Ukongeza kwinani leebhanki kulo lonke uhlanga, i-Stock Market iya kuhlala ivulekile kwiholide yeColumbus Day. I-New York Stock Exchange kunye ne-NASDAQ NYSE Amex ayizukuvalwa ngoMvulo, nge-12 kaOkthobha 2020.
Ngaphandle kweholide kwilizwe liphela, amaziko ahlukeneyo oya kuthi ulindele ukuba uhlale uvulekile uza neFedEx, iUPS, ukupheliswa kwenkunkuma, iipaki kwilizwe liphela, kunye neendawo zomsebenzi nezommandla. Inkonzo yeposi yaseUnited States ivaliwe ngeholide, njengendawo yokusebenza ye-DMV kunye noKhuseleko lweNtlalo.
Usuku lukaColumbus lunye kuzo zonke iholide ezili-10 zomdibaniso; ezahlukileyo ziyi-9 lusuku loNyaka oMtsha, uMartin Luther King Jr. Day, usuku lokuzalwa lukaWashington, uSuku lweSikhumbuzo, uSuku lweNkululeko, uSuku lwaBasebenzi, uSuku lwamaVeterans, uSuku lokuBonga, kunye nosuku lweKrisimesi.
Amazwe ali-15 aseMelika abhiyozela uSuku lwaBantu Bomthonyama Endaweni yoSuku lweColumbus
Ngelixa uSuku lukaColumbus luhleli lucingelwa ukuba luyiholide kwilizwe lonke, uninzi lwamazwe kunye needolophu kwisizwe ngokubanzi azisayamkeli njengosuku lokuphumla kwimizobo okanye kwi-faculty. Ngokwenyani, le iinyanga ezili-12 ezahlukeneyo ziye zatshintsha uSuku lweColumbus ngolunye usuku lweholide.
Ngoku ka Ukugcina izindlu kakuhle , I-14 ithi kunye neSithili saseColumbia bakhethe ukujonga uSuku lwaBantu boMthonyama nge-12 ka-Okthobha, njengelinye okanye kunye neColumbus Day (eyaqala njengeholide yelizwe lonke ngo-1972). La mazwe yiAlabama, iAlaska, iHawaii, iIdaho, iMaine, iMichigan, iMinnesota, iNew Mexico, iNorth Carolina, iOklahoma, iOregon, iSouth Dakota, iVermont kunye neWisconsin. Uninzi lweedolophu zabantu zilandele enye indawo yeholide ngokucocekileyo.
Iholide ibonwa ngembeko yaBemi Bomthonyama okanye aboMthonyama baseMelika ababehlala kumhlaba onokuthi ekugqibeleni uguqule iUnited States, ubude obude phambi kukaChristopher Columbus beza kuwo. Umntu ngamnye uyathandwa kwimbali yakudala yamaMelika aseMelika (abenza malunga neepesenti ezi-2 zabemi baseMelika ngoku) njengabemi bokuqala baseMelika, kodwa ukongeza ukwamkelwa okuthe ngqo kokutshatyalaliswa kugqityiwe ngabantu baseMelika nabanye abantu kunye nesiko kwiintendelezo zekoloniyali.
Usuku lweColumbus, okanye uSuku lwaBantu Bomthonyama, ngawo onke amaxesha luwela ngoMvulo. Apha kulapho iholide iya kubonakala kwiminyaka ezayo:
Kuyixabiso ukuqaphela ukuba uSuku lukaColumbus / uSuku lwaBemi boMdabu luwela ngosuku olufanayo noMbulelo waseCanada. Ezi nyanga zili-12, uMbulelo eMelika uya kubonwa ngoLwesine, Novemba 26, 2020.
Izigaba: Iindaba Iwiki Hulu
uluhlu lwabamnyama lokuphindaphinda ixesha lesi-2
Umdala kangakanani u-casie colson baker
uKelly jo bates ukwehla kobunzima
ukutya okukhawulezayo okuvulekileyo ngoJulayi 4